ဒီသီတင်းပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ အစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာဖို့အတွက် ဈေးကွက်အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်လာအောင် ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာ အစိုးရဌာနအတွင်း အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းပိုင်းကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းချက်တွေ ရှိနေကြတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ပြောဆိုပါတယ်။ ပြည်ပကလာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ စီစဉ်နေသူတွေကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေကို ဆက်စပ်ကြီးကြပ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း ကို ဗွီအိုအေရန်ကုန်ရုံးခွဲ တာဝန်ခံ ဦးသားညွှန့်ဦး က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဝန်ကြီး အခုလိုမျိုး တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ကျနော်မေးချင်တာကတော့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်နေတဲ့အခါမှာ အစိုးရသစ် တက်လာတာဆိုရင် (၂) နှစ်ကျော် (၃) နှစ်ကာလ ရှိလာပါပြီ။ ဒီကာလအတွင်းမှာ အားရကျေနပ်လောက်စရာ စီးပွားရေးပြုပြင်မှု ပြောင်းလဲမှုပိုင်းမှာ ဘာတွေများ တွေ့မိသလဲ။ သတိထားမိသလဲ။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ တခါတည်းတော့လဲ ကျနော်တို့ မျှော်မှန်းသလိုတော့ဖြစ်ဖို့ ကန့်သတ်ချက်တွေ အများကြီးရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အရင်တုန်းကအချိန်နဲ့ တွေးကြည့်ရင်တော့ အားရစရာတွေလည်းရှိတယ်၊ အားမရစရာတွေလည်းရှိတယ်။ ကြိုးစားရအုံးမှာလည်းရှိတယ်။ အဓိက အားရတာကတော့ ကျနော်က tourism sector ကိုပြောမယ်။ အရမ်းသိသိသာသာ changes ရှိလာတယ်။ တော်တော်အားရဖို့ကောင်းတယ်။ tourism နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ enterprise တွေပါ တိုးတက်လာတယ်။ အလားတူပဲ air transportation အလွန်အားရဖို့ကောင်းလောက်အောင် ကြောက်ခမန်းလိလိ ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို တွေ့လိမ့်မယ်။ အရင်တုန်းက (၂) နှစ်ထက်စာရင်။ ဒါလေးတွေ။ နောက်တခုက ICT sector. ကျနော်တို့ တင်ဒါလုပ်တာ ခင်များသိပါတယ်။ Telenor နဲ့ Ooredoo plus ဒီ sector ကလည်း လူတိုင်း အားရလောက်အောင် လူတိုင်းလက်ထဲမှာ ပေါပေါများများနဲ့ sim card လေးတွေရှိပြီး သုံးနိုင်တာ တွေ့ရတော့ ဒါလည်း တော်တော်အားရစရာကောင်းတယ့် လုပ်ငန်းတွေပါ။ အခြားအားရစရာကောင်းတာတော့ လူတွေက ပွင့်လင်းမြင်သာလာတာပေါ့။ ယခင်ထက်စာရင် ပွင့်လင်းလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ 100% ကြိုက်တယ်လို့ ကျနော် မပြောပါဘူး။ အရင်ထက်စာရင် ကျနော်တို့အလုပ်တွေ သူတို့ နားလည်းလာတယ်။ Interaction တွေ ရှိလာတယ်။ Dialogue တွေ ရှိလာတယ်။ နောက် Human Rights, Labor concerns, Peace တို့ အထူးသဖြင့်တော့ Human Rights factor မှာ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တာတွေ တိုးလာတာပေါ့။ အားရစရာပေါ့။ လုံးဝပျောက်သွားတာတော့ မဆိုလိုပါဘူး။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဒါဆိုရင် တော်တော်လေးလုပ်ဖို့ လိုသေးတဲ့ အပိုင်းတွေဆိုရင် ဘယ်အပိုင်းတွေလို့ တွက်မိပါသလဲ။ သုံးသပ်မိပါသလဲ။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ ကျနော်ကတော့ ကျနော့်အတွေးအရပြောရင် ဘာလုပ်လုပ် တိုးတက်ဖို့အပိုင်းကတော့ Layer per layer, sector တိုင်း layer တိုင်းမှာ capacity building လိုတယ်လို့ ကျနော်က တချက်ပြောမယ်။ နောက်တချက်ကတော့ financial sector ကလည်း ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်တော့ လုပ်ရမယ်၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တချို့ က bold ordination လုပ်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ you have to be calculated. အဲဒီနှစ်ခုတော့ အရမ်းလိုနေသေးတယ်လို့။ ဒီဟာက ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်နေသေးတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ နောက်တချက်က အရင်ကဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ နိုင်ငံတကာကနေ စီးပွားရေးပိတ်စို့တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်။ အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်။ အခုဆိုရင် တော်တော်လေးကို လျှော့ပေါ့ပေးလိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အခုသွားနေတဲ့ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရှိနေတဲ့၊ ကြုံနေရတဲ့ အကန့်အသတ်မျိုးတွေ ဝန်ကြီးတို့ ရင်ဆိုင်နေရတာ ရှိသေးလား။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ သူက ကန့်သတ်တာတော့ တော်တော်နည်းလာတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ယခင်ကထက်စာရင် သူတို့နဲ့ interaction တွေ ပိုလုပ်ရဲလာတယ်။ ဥပမာ EU ဆိုရင် ကျနော်တို့က ထိုးသင့်တဲ့လက်မှတ်တွေ အများကြီး ထိုးလာတယ်။ ကျနော်နဲ့လည်း ဒီမှာ EU Task Force meeting လုပ်တယ်။ Lady Ashton က တဖတ် အရင်ကထက် နားလည်းလာတယ်။ သို့လော ဂျာမဏီ၊ အမေရိကမှာလည်း ကျနော်တို့ ထိုးသင့်တာတွေ ထိုးလာတယ်။ ဂျပန်လည်းရှိတယ်။ ကိုရီးယား။ အားလုံးကတော့ ကျနော်တို့ ယခင်ကထက်စာရင် ချုပ်နှောင်းမှုတွေလည်း win-win ပေါ့။ ကျနော်တို့လည်း တဖက်သတ် အရမ်းကြီး ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း မလုပ်ထားဘူး။ ဒီလိုဆိုတော့ သူတို့ နားလည်းလာတယ်။ သူတို့လည်း စိတ်ရှည်သည်းခံလာတယ်။ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ရှေ့ ကို တိုးဖို့တော့ tendency တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ သူတို့က investment များလေ စဉ်းစားရလေပေါ့။ ဥပမာ (၁၀) သန်းလောက် investment ကတော့ အလွန်လွယ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘီလီယန်နဲ့ချီတဲ့ investment ကတော့ သူတို့ စဉ်းစားတာလည်း ကျနော်က အပြစ်မဆိုသာဘူးလေ။ ပိုခိုင်မာအောင် စဉ်းစားမယ်လို့ သူတို့ကလည်း ပြောကြတာပေါ့။ ဥပမာ US ကဆိုရင် အခု Coca Cola, GE တို့ ဒါတွေ အများကြီး လာလုပ်နေတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းတွေဆိုရင် air transportation, health sector, electricity sector တွေမှာ GE က အများကြီး involve ဖြစ်နေတာ။ အလားတူပဲ Europe ကလည်း ဝင်လာတယ့် business တွေ ရှိပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဒါပေမဲ့ တဖတ်မှာ ကျနော်တို့ သတိထားမိတာက မြန်မာနိုင်ငံ ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ တကယ်ကို နင်လားငါလား ဥပမာ အမေရိကန်ဆိုရင် ကြီးကြီးမားမား ဝင်လာတာတွေ မတွေ့ရသေးဘူး။ ကျနော် သတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ သူတို့ဖက်က စိုးရိမ်မှုဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာ အာမခံချက်။ နှစ်ရှည်လများ အာမခံချက်လိုမျိုး သူတို့ စောင့်ကြည့်ချင်တဲ့ သဘောမျိုးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ တဖတ်မှာ ဝန်ကြီးတို့က အစိုးပိုင်းအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံပြီးတော့ ပြောဆိုဆွေးနွေး စည်းရုံးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေပိုင်းကြတော့ လွှတ်တော်နဲ့ဆိုင်နေတာကို။ အစိုးရပိုင်းက အခုလုပ်ချင်တဲ့ဟာနဲ့ လွှတ်တော်ပိုင်းက ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပိုင်းမှာ ကွဲပြားချက်၊ ကွာဟချက်၊ အခက်အခဲတွေ ရှိလား။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ ကျနော်အနေနဲ့ပြောရင် သိပ်မရှိလှဘူး။ New Investment Law ကလည်း သိပ်မဆိုးသာဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံချင်းနိုင်ငံချင်း investment အခုနလိုပေါ့ အာမခံချက် ပေးမယ့် agreement တွေ ကျနော်တို့ ထိုးကြပါတယ်။ ထိုးကြတဲ့အတွက်ကြောင့် သိပ်တော့ ဟိုဟာဖြစ်တာ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့ ကျနော် အခုနပြောသလို များတဲ့ investment ကတော့ ချိန်တာပေါ့။ သင့်တော်တဲ့ investment ကတော့ ဝင်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ်။ နောက်တချက်က တချို့ အပိုင်းတွေမှာတော့ ၂၀၁၅-၁၆ ရဲ့  political stability ကို ကြည့်ချင်တဲ့အပိုင်းလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က ပြောပါတယ်။ ဒါတွေက ဘယ်အစိုးရတက်တက် အစိုးရတခုကို နောက်တခုက honor လုပ်ရတာပါ။ ကျနော်တို့လည်း ယခင်အစိုးရရဲ့  အမွေတွေခံပြီး ယခင်အစိုးရရဲ့  စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ honor လုပ်ရတယ်။ Honor လုပ်ရလို့ ကန့်သတ်ချက် review လုပ်ရတယ်။ ဒီလိုကြီးတော့ ပစ်ပယ်ပြီး လုံးဝဖျက်ပစ်တဲ့ အစိုးရမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လုပ်စရာရှိရင် လာလုပ်ပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ ခင်များ နောက်ကျမယ်ဆိုတော့ လာတော့လာနေပါတယ်။ နောက်တခုက ကျနော်တို့ ရှိပြီးသာ legal aspect ကလည်း အားနည်းချက်လေးတွေရှိတယ်။ ဒါလေးတွေ ကျနော်တို့ ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ အားနည်းချက်က ဘယ်လိုအချက်မျိုးကို သတိထားမိသလဲ။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ တချို့ ကတော့ arbitration ကျရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်။ သူတို့ investment တွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာတော့ အစိုးရချင်းတော့ ဟုတ်ပေမယ့် သူ့အစိုးရကလည်း သူ့လူတွေကို ဒီလို ကာကွယ်ပေးဖို့ ငါတို့လုပ်ထားတယ်ဆိုတာတော့ ပြချင်တာပေါ့။ အဲဒါလေးတွေ ကျနော်တို့ လုပ်နေရတယ်။ အခု ကျနော်တို့ EU နဲ့ လုပ်နေတာရှိတယ်။ US နဲ့ လုပ်နေတာရှိတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့လည်း လုပ်ကြပါတယ်။ ဂျာမဏီနဲ့လည်း လုပ်နေပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း ယခင်လောက် ကျနော်တို့ဖက်ကလည်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ လျှော့ပေးသင့်တာတွေ လျှော့ပေးပြီး move လုပ်နေပါတယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ နောက်တခု မေးချင်တာကတော့ အောက်ခြေ ဦးစီးဌာနတွေ၊ ဝန်ကြီးဌာနတွေ အခြေအနေတွေပါ။ အခုန ဝန်ကြီးတို့ အစိုးရဌာနအနေနဲ့ သမ္မတကြီးက ပြောနေတဲ့အထဲမှာ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်သွားမယ်။ Policy တွေ ချသွားတယ်။ လုပ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ နေရာတွေမှာ ကျနော်တို့ သတိထားမိသလောက် ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်၊ ဦးစီးဌာနအဆင့် အောက်ခြေနယ်တွေမှာ မပြောင်းလဲသေးတဲ့ ဌာနတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ အဲဒီ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ပိုင်း - အဲဒီအပိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားဖို့ ရှိပါသလဲ။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ ကျနော် အခုန ပြောသလို capacity building - ဒါကို ကျနော်တို့ တော်တော်လုပ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်၊ (၃) နှစ်ကျော် အခုအထိပေါ့။ ပြင်တာတွေလည်း ပြင်တာပေါ့။ တခါတည်းတော့လည်း ကျနော်တို့ မျှော်မှန်းသလို မဖြစ်လာနိုင်သေးဘူး။ ဒုတိယ အစိုးရလောက်ကြရင်တော့လည်း ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်လာမှာပေါ့။ ကျနော် ခံယူပါတယ်။ ခင်များလည်း သိတယ်။ နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာက အခြားအုပ်ချုပ်ရေး system နဲ့ လိုက်လျောညီထွေတဲ့ institution တွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ယခု ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေတဲ့ institution တွေ ကျနော်တို့ တည်ထောင်ပေးတယ်။ တည်ဆောက်ပေးတယ်။ တည်ဆောက်နေတယ်။ သို့သော်လဲပဲ လူက ဒီလူပဲဖြစ်တော့ ဒီ institution တွေ fitting ဖြစ်မယ့် မန်နေဂျာတွေက လိုသေးတယ်။ အဲဒါတော့ တော်တော်အားနည်းတယ်။ တချို့ အပိုင်းမှာတော့ ဒီ institution ရှိသော်လည်း အရင် မန်နေဂျာတွေနဲ့ ဒီ institution ကို ဝင်ရတဲ့အခါကြတော့ ဒီ အားနည်းချက်ကတော့ ဘယ်အစိုးရမဆို ရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ စိတ်ရှည်ရမယ်။ ဒီလိုပဲ နားလည်းအောင် move လုပ်ရမယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဘယ်လောက်အထိ အချိန်ယူရမယ်လို့ ဝန်ကြီး ခန့်မှန်းလဲ။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ ကျနော် ထင်တာတော့ ရှေ့ တိုးလာလေ သူတို့ မြင်လေပဲ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်လာလေ ဒီ အရသာကောင်းလေ သူတို့ မြင်လေပဲ။ ကျနော် ကိုသားညွှန့်ဦး တခုပြောမယ်။ ခင်များ စာသင်တဲ့ဆရာ ခင်များမှာ ကျောင်းသား (၁၀၀) ရှိတယ်။ ခင်များသင်တဲ့ (၄၅) မိနစ်တချိန် မိနစ် (၅၀) တချိန်မှာတော့ အားလုံးနားလည်းတဲ့ လူကတော့ တဝက်ပဲ ရှိရင်ရှိမယ်။ မြန်မြန် နားလည်းတဲ့ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့လူက တချို့ က တဝက်လောက် နားလည်းတယ်။ တချို့ က လုံးဝနားမလည်းတဲ့ ကျောင်းသားရှိသလိုပဲ - ကျနော်တို့ လက်တွဲခေါ်သွားရမှာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ forum တွေ၊ meeting တွေ၊ Dialogue တွေ အများကြီးလုပ်ပါတယ်။ အများကြီးကို လုပ်တယ်။ ပြန်ပြီး count လုပ်လိုက်ရင် အံ့သြလောက်အောင် လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုသေးတာပေါ့။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ နောက်တချက်ကတော့ လက်ရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အနေနဲ့ အစိုးရပိုင်းကိစ္စပါ။ အခု စီးပွားရေး တံခါးဖွင့်တယ်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေး လုပ်တဲ့အခါမှာ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းတွေလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ တဖက်မှာ ပြည်သူပိုင် အစိုးရပိုင် ပြည်သူပိုင် လုပ်ငန်းတွေလည်း အများကြီးရှိတော့ ဒီ အားပြိုင်မှု။ နောက်တချက်က နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လာပါတော့မယ်။ ဥပမာ ဝန်ကြီးပြောသွားတဲ့အထဲမှာ ဆက်သွယ်ရေး sector မှာဆိုရင် Telenor နဲ့ Ooredoo လာမယ်။ တဖက်မှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီ အားပြိုင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို စဉ်းစားထားသလဲ။ ဘယ်ဖက်က အကာအကွယ်ပေးမယ်။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ သူကတော့ ကျနော်တို့က level play ground ပဲ - all levels playing ground. ဒါလည်း ဒီလိုပဲ သွားရမှာပဲ။ ဒီလို မသွားလဲ ၂၀၁၅ ကျရင် ခင်များ မရဘူး။ အာဆီယံတခုလုံး level playing ground သွားကြရမယ်။ ဘာကြောင့် ဒီအတွက် ပြင်ဆင်ပြီး သွားရမယ်။ သို့သော်လဲပဲ ဒီလို ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့် quality ကောင်းတာတွေ ထွက်လာမယ်။ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တာတွေ ထွက်လာမယ်။ ပြည်သူ ကျေနပ်တဲ့ services တွေ၊ goods တွေ ဒါတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ - မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ပဲ ယှဉ်ပြိုင်ကြရမယ်။ ဒီလို စီးပွားရေးစနစ်မှာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာတော့ ခင်များ ရှုံးသွားရင်တော့ ဒီပြင့်လမ်းကို စရမှာပဲ။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ တချို့  စိုးရိမ်တာကတော့ ပြည်သူပိုင်ုလုပ်ငန်းတွေ၊ အစိုးရလုပ်ငန်းတွေကနေ နဂိုကတည်းက institution ရှိကြတယ်။ အခိုင်အမာ ရှိတယ်။ တဖက်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြတော့ တဖက်က ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဖက်က ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် အခက်အခဲ မရှိဘူးလား။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ ကျနော်တို့ အရင်လောက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ မပေးတော့ဘူး။ All levels playing ground ဖြစ်အောင် lean လုပ်လာတယ်။ State Owned Enterprises တွေကို lean လုပ်လာတယ်။ ပြီးရင် သူက JP လုပ်ရင်လုပ်၊ PPP လုပ်ရင်လုပ်ဆိုပြီးသွားတော့ အနာဂတ်မှာ State Owned Enterprises တွေက တော်တော့်ကို ပါးသွားမယ်။ အဲဒီမှာ ဘာတွေပေါ်လာမလဲဆိုတော့ Cooperate လုပ်တဲ့ Cooperation တွေ ပေါ်လာမယ်။ ဒီလိုအသွင်နဲ့ သွားပြီးတော့ budget ကလည်း balance budget ဖြစ်အောင် move လုပ်သွားမယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ တခြား ရေနံသဘာဝဓါတ်ငွေ့တို့ရတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရင်တုန်းကတော့ ကာလတခု စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ နေခဲ့တဲ့အပိုင်းပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို ပြောနိုင်ပါသလဲ။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ ကျနော်တို့ အခု EIDI လုပ်တယ်လေ။ EIDI ကို ကျနော်တို့ပဲ စလုပ်တာ။ လုပ်ရင်နဲ့ အခုလာမယ့်လဆိုရင် EIDI အတွက် လူတွေလည်း ရွေးပြီးပြီ - သုံးဖွဲ့ရှိတယ်။ အစိုးရ၊ ရင်းနှီးလုပ်ငန်းရှင်တွေ နဲ့ civil society ဖွဲ့ပြီးပြီ။ Candidates တော့ လျှော်လွှာပို့ဖို့ ကျန်တယ်။ ဒါလည်း အားလုံး ရှင်းထားပြီးပြီ။ အဲဒီအခါကျရင် revenue ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာ ပေါ်လာမယ်။ ရေနံစွမ်းအင်၊ လျှပ်စစ် huge hydropower, forestry, mining ဒါတွေကနဲ့ revenue ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာကို transparent ဖြစ်လာမယ်။ အဲဒါဆိုရင် revenue ထဲကနေ အနာဂတ်သွားမှာက နော်ဝေးနိုင်ငံလိုမျိုး - အဲဒီ revenue ထဲကနေ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတခု တည်ထောင်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ရတယ်။ Elders တွေ ထောက်ပံ့မယ်။ ခလေးတွေ ထောက်ပံ့မယ်။ ပညာတော်သင်တွေ သုံးမယ်။ Welfare တွေ သုံးမယ်။ နော်ဝေးကို နမူနာယူထားတာ။ Oil ကလည်း Welfare လုပ်တာပဲ။ ရှေ့ လျှောက်ကတော့ all transparent ။ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ မပူတော့ဘူး။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ကျနော် နောက်ဆုံးတခု မေးချင်ပါတယ်။ အခု မကြာခင်နောက်ထပ် နောက်နှစ် ၂၀၁၅ ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်။ အစိုးရသစ် တက်လာမယ်။ အဲဒီတော့ ဒီဖက်မှာတော့ ဒီဖက် အစိုးရပိုင်းကနေ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပိုင်းတွေမှာ ပြင်ဆင်တယ်၊ မူဝါဒတွေ ချမှတ်တယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ စိုးရိမ်တာကလည်း အဲဒါပါပဲ။ အစိုးရ ပြောင်းလို့ရှိရင် ပြောင်းသွားမလား။ အဲဒီတော့ ဒီမူဝါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရ ပြောင်းသွားလို့ရှိရင် ရှိပြီးသာ မူဝါဒတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လောက်အထိ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိမလဲလို့ အာမခံပြောနိုင်မလဲ။
ဦးစိုးသိန်း ။ ။ ပြောင်းဖို့တော့ သိပ်မရှိသလောက်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ယခုအချိန်မှာ ဒီအစိုးရ တက်လာပြီးကတည်းက နိုင်ငံတကာက ကူညီတဲ့လူတွေ အဖွဲ့တွေက အများကြီး များပါတယ်။ ကျနော်တို့ လုပ်သမျှကလည်း ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် Framework for Economic Development Strategies က နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်သူလာလာ ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ရမှာပဲ။ ဒါက ကျနော့်အမြင်။ ထို့အတူပဲ Poverty Reduction ဘယ်အစိုးရတက်တက် အစိုးရတိုင်းက လုပ်ရမှာပဲ။ Rural Development လည်း လုပ်ကြရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ Frame ကတော့ မပြောင်းဘူး။ Strategies ကတော့ မပြောင်းနိုင်ဘူး။ သို့သော်လဲပဲ Technical ပိုင်းကတော့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ ပြောင်းနိုင်တယ်။ ဒီလို ယူဆတယ်။ နောက်တခုက ဒီခေတ်မှာ ကျနော်တို့ လုပ်သမျှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးက ပြည်သူကို ချပြပြီးမှ awareness လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တော်တော်များများက ပြည်သူသိပြီးမှ ပြည်သူဆွေးနွေးပြီးမှ လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရင်လို abrupt change 180 degree out of face တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။
ဦးသားညွှန့်ဦး ။ ။ ဝန်ကြီး အခုလို ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။